ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံအတွင်းဖောက်ထွင်းခိုးယူသောင်းကျန်းနေတဲ့ သူခိုးကြီးကို မိပါပြီ – ရွှေအလင်း
၂၇-၂-၂၀၁၉ နေ့ညတွင် ယခုလပိုင်း ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံအတွင်း နောက်ဖေးတံခါး၊ ပြတင်းပေါက်များမှ လိုက်လံဖောက်ထွင်းနေသော သူခိုးကို ဘုရင့်နောင် သာယာစည်းကမ်း ညလုံခြုံရေးအဖွဲ့မှ ဖမ်းမိခဲ့ပါပြီ။
တရားခံမှာ ဘုရင့်နောင်ကို ထုံးလိုမွှေ၊ ရေလိုနှောက် နယ်မြေကျွမ်းကျင်ပြီး လှိုင်သာယာ၊ ရှမ်းချောင်းနေ အောင်ကျော်စိုး ဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သော ၁၅-၆-၂၀၁၇ က ဘုရင့်နောင် ခရေလမ်းဂိတ်မှ သိန်း ၂၀ နီးပါး ခိုး၍ အဖမ်းခံထားရပြီးဖြစ်ပါသည်။
ယခင်ကလည်း ပွဲရုံပိုင်ရှင်များအား သတိပေးပြီးဖြစ်ပါသည်။ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံများ နောက်ဖေးတံခါး၊ ပြတင်းပေါက်များသည် ဆွေးမြေ့၍ လူဝင်ရလွယ်နေခြင်းသည် အဓိကအချက်ဖြစ်နေပါသည်။
ယခုလည်း ပွဲရုံပိုင်ရှင်များသည် ညလုံခြုံရေးအဖွဲ့အား အလုပ်မလုပ်ဟု ပြောဆိုနေကြပါသည်။လူကြီးမင်းတို့ အေးချမ်းစွာ အိပ်စက်နေစဉ် ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံအတွင်း ညလုံခြုံရေးအဖွဲ့သည် ညစဉ် မိုးလင်းထိ တစ်ညလုံးအလုပ်လုပ်ရပြီး ဘုရင့်နောင်အားစောင့်ရှောက်လျက်ရှိပါသည်။
ဥပမာ။ ရေကင်း၊ မီးကင်း အကြောင်းတစ်စုံတရာဆိုလျှင် အင်းအားသုံး၍ ဘုရင့်နောင်အတွက် အကျိုးရှိလှပါသည်။
ယခုလတွင် အဆိုပါ ဖောက်ထွင်းသူမှာ အတင့်ရဲ၍ ဘုရင့်နောင်ထဲပတ်ဖောက်လျက်ရှိသဖြင့် ညလုံခြုံရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်နှင့် ဝန်ထမ်းများညစဉ် အရပ်ဝတ်ဖြင့် ဂါလီနင်းခြင်း၊ ဆိုင်များထိုင်ခြင်း၊ ကင်းပတ်ခြင်းနှင့် ဝန်ထမ်းများကို အလှည့်ကျ ညစ်ပတ်နံစော်၊ ခြင်ကိုက်ခံကာ နောက်ဖေးလမ်းကြားများတွင် ကင်းပုန်းချကာ နေ့စဉ်၊ ညစဉ် စောင့်ဖမ်းနေရပါသည်။
ထိုအရာကို သူခိုးသိရန်မဖြစ်၍ လူကြီးများ၊ ပွဲရုံပိုင်ရှင်များ အပြောအဆိုခေါင်းငုံ့ခံကာ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ယခု ဖောက်ထွင်းသူခိုးမိမှ ထုတ်ဖော်ပြောခြင်းဖြစ်ပါသည်။
* ဘုရင့်နောင် လုပ်ငန်းရှင်များခင်ဗျား…သတိထားနိုင်ပါရန် ဖြစ်စဉ် အသိပေးအပ်ပါသည်။
1. ဖောက်ထွင်းမှု ကျူးလွန်သူမှာ ကုန်တင်ကားကြီးများ အမဲဆီ လိုက်ထိုးသူဖြစ်၍ လူရင်းနှီး၊ နယ်မြေကျွမ်းကျင်ခြင်း။
2. တခြားနေရာပြန်အိပ်ခြင်း၊ အပေါ်ထပ်လူအိပ်ခြင်း။
3. အိမ်နောက်ဘက်သံပန်းများ ဆွေးမြေ့ကာ အလွယ်တကူဖြုတ်ရခြင်း။
4. နောက်ဖေးလမ်းကြား ဝင်/ထွက် ပေါက်များ မလုံခြုံ၊ ကွယ်နေခြင်း။ ( ညဘက် လုံခြုံရေးအဖွဲ့မှ ဓါတ်မီးများနှင့် ညစဉ် ကင်းလှည့် ထိုးကြည့်ပါသည်။ )
5. ယခု ဖောက်ထွင်းသူမှာ ယခင် ဘုရင့်နောင်အတွင်း ဖောက်ခိုး၍ ထောင်ကျပြီး ပြန်လွတ်လာသူဖြစ်၍ ဘုရင့်နောင်တွင်း ယခု အိမ်များစွာ ဖောက်ထားသူဖြစ်ပါသည်။
6. ဘုရင့်နောင်အတွင်း ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများသည် သူ့အကျင့်သူ ယခင်ကျူးလွန်သကဲ့သို့ ထိုအတိုင်း ပြန်ကျူးလွန်တတ်ပါသည်။ ( ဥပမာ..ဆီတိုင်ကီ အဖုံး ခိုးသူသည် ဖမ်းလိုက်၊ လွတ်လိုက်၊ ဆီတိုင်ကီ အဖုံးပဲ ပြန်ခိုးလိုက်။ ဖုန်းလိုက်ခိုးသူသည် ကောက်တိုကောက်သကဲ့သို့နှင့် ကားများ၊ ပွဲရုံရှေ့များမှ ဖုန်းများသာ လိုက်ခိုးတတ်ပါသည်။ )
* လုပ်ငန်းရှင်များ သတိပြုစေရန် အပြုသဘော အသိပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အမြဲတမ်းခိုးနေ၍ မျက်နှာမဖျက်တော့ပါ။ အားလုံးသတိထားနိုင်ရန်
(သတင်း၊ ဓါတ်ပုံ-ဘုရင့်နောင် သာယာစည်းကမ်း ညလုံခြုံရေး အဖွဲ့…။)
၂၇-၂-၂၀၁၉ နညေ့တှငျ ယခုလပိုငျး ဘုရငျ့နောငျပှဲရုံအတှငျး နောကျဖေးတံခါး၊ ပွတငျးပေါကျမြားမှ လိုကျလံဖောကျထှငျးနသေော သူခိုးကို ဘုရငျ့နောငျ သာယာစညျးကမျး ညလုံခွုံရေးအဖှဲ့မှ ဖမျးမိခဲ့ပါပွီ။
တရားခံမှာ ဘုရငျ့နောငျကို ထုံးလိုမှေ၊ ရလေိုနှောကျ နယျမွကြှေမျးကငျြပွီး လှိုငျသာယာ၊ ရှမျးခြောငျးနေ အောငျကြျောစိုး ဖွဈပွီး လှနျခဲ့သော ၁၅-၆-၂၀၁၇ က ဘုရငျ့နောငျ ခရလေမျးဂိတျမှ သိနျး ၂၀ နီးပါး ခိုး၍ အဖမျးခံထားရပွီးဖွဈပါသညျ။
ယခငျကလညျး ပှဲရုံပိုငျရှငျမြားအား သတိပေးပွီးဖွဈပါသညျ။ဘုရငျ့နောငျပှဲရုံမြား နောကျဖေးတံခါး၊ ပွတငျးပေါကျမြားသညျ ဆှေးမွေ့၍ လူဝငျရလှယျနခွေငျးသညျ အဓိကအခကျြဖွဈနပေါသညျ။
ယခုလညျး ပှဲရုံပိုငျရှငျမြားသညျ ညလုံခွုံရေးအဖှဲ့အား အလုပျမလုပျဟု ပွောဆိုနကွေပါသညျ။လူကွီးမငျးတို့ အေးခမျြးစှာ အိပျစကျနစေဉျ ဘုရငျ့နောငျပှဲရုံအတှငျး ညလုံခွုံရေးအဖှဲ့သညျ ညစဉျ မိုးလငျးထိ တဈညလုံးအလုပျလုပျရပွီး ဘုရငျ့နောငျအားစောငျ့ရှောကျလကျြရှိပါသညျ။
ဥပမာ။ ရကေငျး၊ မီးကငျး အကွောငျးတဈစုံတရာဆိုလြှငျ အငျးအားသုံး၍ ဘုရငျ့နောငျအတှကျ အကြိုးရှိလှပါသညျ။
ယခုလတှငျ အဆိုပါ ဖောကျထှငျးသူမှာ အတငျ့ရဲ၍ ဘုရငျ့နောငျထဲပတျဖောကျလကျြရှိသဖွငျ့ ညလုံခွုံရေးအဖှဲ့ ခေါငျးဆောငျနှငျ့ ဝနျထမျးမြားညစဉျ အရပျဝတျဖွငျ့ ဂါလီနငျးခွငျး၊ ဆိုငျမြားထိုငျခွငျး၊ ကငျးပတျခွငျးနှငျ့ ဝနျထမျးမြားကို အလှညျ့ကြ ညဈပတျနံစျော၊ ခွငျကိုကျခံကာ နောကျဖေးလမျးကွားမြားတှငျ ကငျးပုနျးခကြာ နစေ့ဉျ၊ ညစဉျ စောငျ့ဖမျးနရေပါသညျ။
ထိုအရာကို သူခိုးသိရနျမဖွဈ၍ လူကွီးမြား၊ ပှဲရုံပိုငျရှငျမြား အပွောအဆိုခေါငျးငုံ့ခံကာ ကိုယျ့အလုပျကိုယျလုပျနခွေငျးဖွဈပါသညျ။ယခု ဖောကျထှငျးသူခိုးမိမှ ထုတျဖျောပွောခွငျးဖွဈပါသညျ။
* ဘုရငျ့နောငျ လုပျငနျးရှငျမြားခငျဗြား…သတိထားနိုငျပါရနျ ဖွဈစဉျ အသိပေးအပျပါသညျ။
1. ဖောကျထှငျးမှု ကြူးလှနျသူမှာ ကုနျတငျကားကွီးမြား အမဲဆီ လိုကျထိုးသူဖွဈ၍ လူရငျးနှီး၊ နယျမွကြှေမျးကငျြခွငျး။
2. တခွားနရောပွနျအိပျခွငျး၊ အပျေါထပျလူအိပျခွငျး။
3. အိမျနောကျဘကျသံပနျးမြား ဆှေးမွကေ့ာ အလှယျတကူဖွုတျရခွငျး။
4. နောကျဖေးလမျးကွား ဝငျ/ထှကျ ပေါကျမြား မလုံခွုံ၊ ကှယျနခွေငျး။ ( ညဘကျ လုံခွုံရေးအဖှဲ့မှ ဓါတျမီးမြားနှငျ့ ညစဉျ ကငျးလှညျ့ ထိုးကွညျ့ပါသညျ။ )
5. ယခု ဖောကျထှငျးသူမှာ ယခငျ ဘုရငျ့နောငျအတှငျး ဖောကျခိုး၍ ထောငျကပြွီး ပွနျလှတျလာသူဖွဈ၍ ဘုရငျ့နောငျတှငျး ယခု အိမျမြားစှာ ဖောကျထားသူဖွဈပါသညျ။
6. ဘုရငျ့နောငျအတှငျး ပွဈမှုကြူးလှနျသူမြားသညျ သူ့အကငျြ့သူ ယခငျကြူးလှနျသကဲ့သို့ ထိုအတိုငျး ပွနျကြူးလှနျတတျပါသညျ။ ( ဥပမာ..ဆီတိုငျကီ အဖုံး ခိုးသူသညျ ဖမျးလိုကျ၊ လှတျလိုကျ၊ ဆီတိုငျကီ အဖုံးပဲ ပွနျခိုးလိုကျ။ ဖုနျးလိုကျခိုးသူသညျ ကောကျတိုကောကျသကဲ့သို့နှငျ့ ကားမြား၊ ပှဲရုံရှမြေ့ားမှ ဖုနျးမြားသာ လိုကျခိုးတတျပါသညျ။ )
* လုပျငနျးရှငျမြား သတိပွုစရေနျ အပွုသဘော အသိပေးခွငျးဖွဈပါသညျ။
အမွဲတမျးခိုးနေ၍ မကျြနှာမဖကျြတော့ပါ။ အားလုံးသတိထားနိုငျရနျ
(သတငျး၊ ဓါတျပုံ-ဘုရငျ့နောငျ သာယာစညျးကမျး ညလုံခွုံရေး အဖှဲ့…။)
ရေဘေးသွားရောက်လှူဒါန်းလိုသူများ ကားလိုအပ်ချက်ရှိပါက အားမနာတမ်း အခမဲ့...